Ny finoan’ny ray aman-dreny, ohatra faka tahaka (1)
"Jehovah ô, Andriamanitr’i Abrahama tompoko, ambino aho anio." Genesisy 24:12
Lohataona 1945: Vita ny ady, niverina tsikelikely tamin’ny laoniny ny fiainana. Efa tena nihatsara ny toe-piainana, nefa mbola teo ihany ny famerana sakafo, ary sarotra ho an’ny renim-pianakaviana ny namahana vava fito.
Ilay fiaranay tena simba nandritra ny ady dia afaka nandeha indray, hany ka fety taminay ankizy ny fitsangantsanganana voalohany. Tanjona mazava no nokendrena tamin’izay, dia ny hiezaka hitady ovy vitsivitsy any ambanivohitra, mba hamenoana ny sakafo andavanandro. Hatry ny fony kely izahay dia vavolombelon’ny finoan’ny ray aman-dreninay. Talohan’ny nandehanana dia niara-nivavaka izahay, nangataka fanampiana sy fiarovana tamin’ny Tompo.
Rehefa nandeha kilometatra vitsivitsy izahay dia nahita mpamily sahirana nanolo kodiarana vaky, teo amoron’ny arabe.
“Dada a ! tsy manana afa-tsy sandry tokana ilay rangahy teo !” hoy ilay zandriko lahy. Niverina faingana izahay, nankany amin’ilay fiara tra-pahavoazana.“ Misy azo anampiana anao ve, tompoko?
— Ie, tena misy !” Dia voasolo vetivety ilay kodiarana.
Tsy tsaroako ny tohin’ny resaka, fa toy ny mbola hitako kosa ilay rangahy nanolotra tamin’ny raiko, karatra misy ny anarany sy ny adiresiny nanoratany teny kely. Dia iny indray izahay lasa nikaroka ilay toerana voatondro tao. Raha vao tonga tany izahay, dia narahina haingana ny toromarika nosoratan’ilay mpamily teo amin’ny karatra, ka nametrahana gony lehibe feno ovy tao anaty fiaranay.